တီဗွီတစ်ခုရွေးရန်သင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အရာ Gadget သတင်း
Jordi Gimenez | | တီဗီများ
အိုကေယခုကျွန်ုပ်တို့၏ room ည့်ခန်းအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားအသစ်တစ်စဝယ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်ပြီး၊ ပထမတော့သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည့်ဤအလုပ်မှာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှုပ်ထွေးလာသည်။ တီဗီများLED မျက်နှာပြင်၊ Ultra HD, OLED, ဆက်သွယ်မှုများစွာပါ ၀ င်သောစမတ်တီဗီ၊ စူပါကြီးမားသောအရွယ်အစား၊ ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်နှင့်အပိုပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်ပါသော ...
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်မှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးကြည့်ရမည်မှာဤရုပ်မြင်သံကြားစက်အသစ်တွင်သုံးစွဲရမည့်ဘတ်ဂျက်ဖြစ်သည်၊ ထို့နောက်စျေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာအရေအတွက်ကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ we ည့်ခန်းအတွက်တီဗီအသစ်မဝယ်ခင်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကြံဥာဏ်များစွာပေးလိုပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့နှင့်အတူစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာအချို့ကိုတွေ့မြင်ရမည်နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ရုပ်မြင်သံကြားကိုမပြောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းရွေးချယ်ရမယ်စမတ်ဖုန်းလိုပဲ
ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘတ်ဂျက်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူနိုင်သောရုပ်မြင်သံကြားအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှရုပ်မြင်သံကြားများသည်စျေးနှုန်းကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုအာရုံစိုက်ခြင်းသည်မိုက်မဲရာရောက်သည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာသည်နှင့်အမျှဤစျေးကွက်သည်တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာပြီးစျေးနှုန်းများသိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ ဒီတော့ 4K UHD တီဗီသည်ယနေ့အချိန်တိုအတွင်းကုန်ကျမည့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီအချက်အချို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသော်လည်းယနေ့ ၀ ယ်ခြင်းကိုမစတင်ခင်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
1 AirPlay2ဟာသဟဇာတမဖြစ်ဘူးလား။
2 တီဗီအရွယ်အစားနှင့် resolution
4 LED display ကိုသို့မဟုတ် OLED display ကို
5 စမတ်တီဗီ, အသံနှင့်ဆက်သွယ်မှု
AirPlay2ဟာသဟဇာတမဖြစ်ဘူးလား။
AirPlay2နှင့် HomeKit လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးမှတီဗီများနှင့်လိုက်ဖက်သောကြောင့်တီဗွီအသစ်ဝယ်ရန်ဤရွေးချယ်မှုကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ Samsung model များသည်၎င်းတို့တွင်ထည့်သွင်းထားသောဤနည်းပညာအသစ်နှင့်အတူရရှိနိုင်သည့်မော်ဒယ်များကိုပေးသည် သင်က Apple စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုသူဖြစ်ပါက ဤရုပ်မြင်သံကြားများထဲမှတစ်ခုသည်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုရုပ်မြင်သံကြား၌ကြည့်ရှုရန်နှင့် HomeKit သဟဇာတဖြစ်သောထုတ်ကုန်များကိုသုံးနိုင်ရန်အဆင်ပြေသည်။
ဒီနည်းပညာအသစ် ယခုနှစ် 2019 ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဆက်လက်တိုးချဲ့မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ရုပ်မြင်သံကြားအမှတ်တံဆိပ်အားလုံးတွင်အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်သင့်တွင် Apple ထုတ်ကုန်တစ်ခုရှိပါကသို့မဟုတ်၎င်းနည်းပညာများကိုပျော်မွေ့ရန်စိတ် ၀ င်စားသောကြောင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဝယ်ယူရန်စီစဉ်နေပါက၎င်းကိုသင်စိတ်ဝင်စားသည်။
သင်၏မူလမြင်ကွင်းအတွက်သင်လိုအပ်မည့်အရွယ်အစားကိုတိတိကျကျသိရှိရန် (ပိုကြီးသည့်အရာကိုဖယ်ထားခြင်း) ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည် ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုဖာ၊ စားပွဲဒါမှမဟုတ်အလားတူတီဗီတွေကိုကြည့်တော့မယ့်အကွာအဝေး။ ၎င်းသည်အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာကိုလိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီသည်အစပိုင်းတွင်ရောင်းသူကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှအဆိုပြုထားသည့်နည်းလမ်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။
၎င်းအတွက်၎င်းတို့မှကမ်းလှမ်းသောစံသတ်မှတ်ချက်များရှိသည် ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများအသင်း၊ ကြည့်ရှုမည့်အကွာအဝေးသည်စက်၏အကျယ်ထက်နှစ်ဆနှင့်ငါးဆအကြားရှိရမည်ဖြစ်သည့် Full HD resolution ကိုကန ဦး တွင်ဖော်ပြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ UHD ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်ရုပ်မြင်သံကြား၏အကျယ်နှင့် ၂.၅ ဆအကြားကြည့်နိုင်သည့်အကွာအဝေးသည်တစ်ဝက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ငါဒါကိုဘယ်လိုပြောလဲ ဒါဟာညွှန်ပြသည်နှင့်မျက်နှာတန်ဖိုးကိုမှာယူမရသင့်ပါတယ်.
တီဗီအရွယ်အစားသည်ကိစ္စအများစုတွင်သင်သုံးစွဲလိုသောငွေပမာဏအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်စိတ်ကူးသည်သင်တပ်ဆင်လိုသည့်နေရာကိုပရိဘောဂအပိုင်းအစတစ်ခုသို့မဟုတ်အလားတူဖြစ်စေအလွယ်တကူဝင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ။ အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သည် ကျွန်တော်တစ် ဦး ခန့်မှန်းလမ်းအတွက်အထက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့သော resolution ကိုညှိ မည်သည့်ထောင့်နှင့်အဝေးမှရုပ်မြင်သံကြားကိုကောင်းစွာကြည့်ရှုနိုင်လောက်သည်။
အခုအချိန်မှာကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ပါတဲ့တီဗီဟာသူတို့စတင်ချိန်ကထက်ပိုပြီးစျေးသက်သာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဝယ်ယူမှုကိုမစတင်မီဒီမော်ဒယ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီအကြံပြုချက်ကဒီဟာကပိုကောင်းပါတယ်။ ကွေးနေသောတီဗီရှေ့တွင်ရပ်။ ကြည့်ရှုခြင်းအတွေ့အကြုံကိုစစ်ဆေးပါ သူကအရာအားလုံးထက်ရှေ့တော်၌သင်တို့ကိုပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ယူခြင်း၏ Transcendental အိုင်မဟုတ်ကြောင်းမှန်ကန်သော်လည်း၎င်းသည်ဤကွေးသောဖန်သားပြင်များကပြားချပ်ချပ်များထက်ကမ်းလှမ်းခြင်းကိုနှစ်ခြိုက်လိုပေမည်။
ဤကွေးသောဖန်သားပြင်အမျိုးအစားများတွင်အကောင်းဆုံးအရာမှာဗဟိုချက်ချင်းရှေ့တွင်ရပ်တည်ခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့နေရာရွှေ့ပြောင်းခံရသူများ၏အမြင်အာရုံသည်အတူတူပင်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်“ မကောင်းသောအတွေ့အကြုံ” ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်စင်တာမှမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေသူများနှင့်မတူပါ။
ပြားချပ်ချပ်သို့မဟုတ်ကွေးသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထင်ဟပ်မှုပြissueနာအတော်များများပြီးဆုံးပါပြီ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကွေးသောဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အနည်းငယ် ပို၍ ပြသပါလိမ့်မည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရရုပ်မြင်သံကြားကိုမည်သည့်နေရာ၌ထားမည်ကိုကြည့်။ အလင်းသည်၎င်းအပြည့်အဝကျရောက်သည်သို့မဟုတ်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တိုက်ရိုက်ရှိနေသည်ကိုကြည့်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွေးကောက်ရုပ်မြင်သံကြားတွေကရောင်ပြန်ဟပ်မှုမှာပိုကောင်းပုံရပေမဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်အစီအစဉ်များထက်ပိုရှိသည်.
LED display ကိုသို့မဟုတ် OLED display ကို
ရုပ်မြင်သံကြားကို ၀ ယ်တဲ့အခါဒီအချက်ကအဓိကအချက်ဖြစ်တယ်။ ထို့အပြင် LED (သို့) OLED ပြားများအကြားစစ်ပွဲသည်ယနေ့ထိတက်ကြွနေဆဲဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူတစ် ဦး စီအနေဖြင့်၎င်းတို့တစ်ခုစီနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုစဉ်းစားနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဘောင်ကွက်များအကြားခြားနားချက်များကိုတတ်နိုင်သမျှဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျတတ်နိုင်သမျှရှင်းပြရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည် တစ်ခုက backlit ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ pixel တွေကိုလွတ်လပ်စွာမီးလင်းစေတယ်.
OLED panel များသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအရောင်များကိုပြသသည်။ အနက်ရောင်လူမည်းများ (LEDs များကိုပိတ်ထားစဉ်ကတည်းက)၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆန့်ကျင်ဘက်နှင့် ပို၍ လက်တွေ့ကျသည့်အရောင်များရှိသည်။ အဖြစ်မှန်၌ OLED များသည်နည်းလမ်းတိုင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံသဏ္likeာန်ရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် LEDs မပါ ၀ င်သောပြhaveနာတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည် panel ၏သက်တမ်းနှင့်ဝတ်ဆင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကပိုကောင်းတဲ့ panel များဖြစ်သည့်အခါမှန်ပေမယ့် OLEDs နိုင်ပါတယ် LED ပြားမတိုင်မီပျက်ကွက် သူတို့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှည်လျားထိတွေ့မှုနှင့်အတူကိုမီးရှို့လေ့ကတည်းက။
၎င်းသည်လက်ရှိတွင်လုပ်ဆောင်နေသောအရာဖြစ်ပြီး၊ OLED panel ကိုဆက်လက်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည်မှာမှန်သော်လည်း LED panel တစ်ခု၏ကြာချိန်အထိမဟုတ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင် OLED panel များသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသောရုပ်မြင်သံကြားစက်များတွင်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ဤအများ၏စျေးနှုန်းများလည်းများသောအားဖြင့်အတန်ငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
ရုပ်မြင်သံကြားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောကျန်သတ်မှတ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ရွေ့လျားနေသောဈေးနှုန်းပေါ် မူတည်၍ အများအားဖြင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းမရှိပါ။ Smart TV သည်ဖြစ်စေ၊ မသည်ဖြစ်စေအသုံးပြုသူများစွာအတွက်သော့ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်အားလုံးသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးသည်သူတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သည် webOS, Tizen သို့မဟုတ် Android TV။ ရွေးစရာများထည့်ရန် Chromecast၊ Apple TV, Fire Stick သို့မဟုတ်အလားတူဆက်သွယ်မှုများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။
ရုပ်မြင်သံကြားအသစ်များ၏အသံကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်းပြောရမည် ဒါကြောင့်အသံပြည့် ၀ တဲ့ TV ရှိဖို့ဒါမှမဟုတ် TV ကိုအပြည့်အဝနားထောင်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ ဖြစ်ရပ်အားလုံးတွင်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် AirPlay2ရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပြောသောအခါဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်ရုပ်မြင်သံကြား၏အသံတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအပိုပေးသည်။ ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
ဆက်သွယ်မှုအကြောင်းကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ် HDMI port များများများလေလေပိုကောင်းလေလေပိုမိုမြင့်မားသော resolution ပါဝင်မှုနှင့် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုအတွက် Ethernet သို့မဟုတ် Gigabit Ethernet port တီဗွီ ၀ ယ်ရရင်သူတို့ကဒီနေ့အခြေခံပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် optical output နှင့်အခြားဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားများရှိနိုင်သော်လည်းအရေးကြီးသောအရာမှာ TV နှင့် HDMI တို့၏ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းအရာအားလုံးကိုအထက်တွင်ကြည့်ရှုရမည်။ ထို့ကြောင့်ဤသဘောမျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်မှုများကိုရရှိရန်ရုပ်မြင်သံကြား၏အရွယ်အစားနှင့်အရည်အသွေးကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်၎င်းသည်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်ပြီးအချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်တိုးပွားလာလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ရုပ်ပုံနှင့်အသံ » တီဗီများ » TV ရွေးနည်း
ကျွန်ုပ်၏ Instagram အကောင့်ကိုမည်သို့အတည်ပြုရမည်နည်း